Homeराष्ट्रिय खबरम राजनीतिमा जाने–नजाने परिस्थितिले तय गर्छ : कुलमान
चिरञ्जीवी पौडेल/रवीन्द्र घिमिरे । काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणबाट २६ वर्षपछि सेवानिवृत्त भएका कुलमान घिसिङ अहिले अनिच्छित र पट्यारिलो फुर्सदमा छन् । देशका लागि काम गर्ने हुटहुटी मनमा बोकेर घरमा निस्क्रिय बस्नुपर्दा पक्कै पनि उनको व्यग्रता बढीरहेको होला ।
आँसु झार्दै कुलमानले भने-२/४ घन्टा लोडसेडिङ गरेको भए करोडौं कमाउँथे होला (भिडियोसहित)
प्राधिकरणले लिड बल्ब खरिद गर्न लागेका बेला केही मिडियाले आलोचना गरेपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा कुलमान पत्रकार सम्मेलनमा रोएका थिए । आफूलाई यस्ता खालका नचाहिँदा आरोपले भित्रैदेखि पिरोल्ने उनी बताउँछन् ।
‘कहिलेकाहीँ आफूले हतारमा लिएका निर्णयले कसैलाई चोट पुगेको पछि आभास भयो भने पनि मेरो मन भित्रैबाट हुँडलिन्छ,’ उनले भने । सम्भवत उनको आशय कर्मचारी सरुवालाई लिएर हुने कमि–कमजोरीतर्फ ईंगित गरिरहेका थिए ।
कुलमान सकेसम्म विवादबाट टाढा रहन खोज्छन् । सानो कुरामा चुक भए त्यसले आफूलाई ठूलो असर गर्ने उनलाई थाहा छ । यसले अनवरतरुपमा उनलाई एकप्रकारको दवाव पनि महसुस हुन्छ ।
‘हिँड्दा, बोल्दा, खाँदा, बस्दा हरेक समय सचेत रहनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सानो–सानो कुरा पनि मानिसहरुले नियालिरहेका हुन्छन् ।’
त्यसो त उनको जीवनशैली पहिल्यैदेखि साधारण थियो । उनले चुरोट त कहिल्यै खाएनन् । रक्सीचाहिँ सांस्कृतिक र सामाजिक कारणले पनि बेलाबखत खान्थे । उनको सम्प्रदायका विभिन्न रिवाजमा सगुनको रुपमा रक्सी खानैपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ पार्टीमा पनि अरुलाई साथ दिन पिइदिनुपर्छ । त्यो पनि उनले अहिले निकै कम गरेका छन् ।
फुर्सदको समय सामाजिक भेटघाटमा रमाउने गर्छन् कुलमान । धेरैजसो गाउँतिर जान रुचाउँछन् । गीत–संगीतमा पनि रुचि रहेको उनले बताए ।
‘मलाई नेपालीपन भएको र सिरियस टाइपका गीतहरु सुन्न मन पर्छ,’ उनले भने ।
फ्यान फलोइङ र सम्मान
हुन त ‘फ्यान फलोइङ’ भन्ने शब्द प्रायः सेलिब्रेटीहरुलाई उनीहरुका पारखीले पछ्याउने अर्थमा प्रयोग हुन्छ । कुलमान सेलिब्रिटी नभएर एक राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् । र, पनि उनको ‘फ्यान फलोइङ’ नेपालका कुनै पनि सेलिब्रिटीको भन्दा उच्च छ ।
नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै कुलमान एकाएक हिरो भए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुअगाडिसम्म उनलाई कसैले चिन्दैनथे । तर, अहिले पछाडिबाट हेर्दा पनि चिन्छन् । उनी जहाँ जाँदा पनि भिड जम्मा हुन्छ । फोटो–सेल्फी खिच्नेहरु लाइन लागिहाल्छन् ।
‘पहिले–पहिले बेलाबखत सपरिवार रेस्टुरेन्ट गइन्थ्यो । श्रीमतीसँग सपिङ गइन्थ्यो । तर, अहिले त्यो क्रम लगभग टुटेको छ । मलाई देख्नासाथ मान्छेहरु आएर फोटो/सेल्फी खिच्न थालिहाल्नुहुन्छ । नाई भन्न पनि भएन ।’
‘बाटोमा हिँड्दा प्रायः मास्क र ‘क्याप टोपी’ लगाउँछु, र पनि कसरी–कसरी ठम्याइहाल्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘ऊ कुलमान भन्दै आउनुहुन्छ र फोटो खिच्न थालिहाल्नुहुन्छ । त्यसैले परिवारसँग बाहिर हिँड्ने क्रम ९० प्रतिशत घटेको छ । एकप्रकारले भन्नुपर्दा मेरो सामाजिक जीवनशैली पूरै परिवर्तन भएको छ ।’
विदेश जाँदा उनी जहाजभित्रै घेरिन्छन् । विदेशका एयरपोर्टमा ओर्लिनासाथ एकैछिनमा ‘कुलमान, कुलमान’ भन्दै भिड जम्मा भइहाल्छ । कोही सेल्फी खिच्न थाल्छन् भने गफ चुट्न सुरु गर्छन् ।
उनीसँग बोल्न आउने मान्छेहरुले प्रायः कस्तोखालको कुरा गर्छन् होला ?
‘धेरैजसोले त प्रशंसा नै गर्नुहुन्छ । लोडसेडिङ हटाएको प्रसंग हाइहाल्छ । अलि बौद्धिक मान्छेहरुसँग भेट भयो भने केही राम्रा सल्लाह–सुझाव पनि दिनुहुन्छ । खासगरि विदेशमा बस्नेहरुले । अहिले चाहिँ धेरैको चासो मेरो पुनःनियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा छ ।’
(हामीले यो अन्तरवार्ता लिइरहँदा पनि तीनवटा समूहले उनलाई पहिल्याएर फोटो खिच्न आइहाले । उनीहरुमध्ये एकजनाले कान नजिक मुख लगेर फुस्फुसाए– चान्स के छ दाइ ? पोलिटिक्स धेरै छ है ? कुलमानले जवाफ दिए, ‘म नै दोहोरिनुपर्छ भन्ने के छ र, सरकारले जो ल्याए पनि राम्रै मान्छे ल्याउँला नि ।’)
जनताबाट कुलमानले जुन सम्मान र प्रेम पाएका छन्, विगतमा सायदैसरकारी ओहोदामा बसेका कुनै व्यक्तिले पाएका थिए । यसले उनलाई पक्कै पनि ऊर्जा थपेको छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ असहज परिस्थिति पनि आइदिन्छ ।
उनले एउटा घटना सुनाए ।
‘एकपटक सचिवज्यूको टोलीमा विदेश जान भनेर एयरपोर्ट पुगेको थिएँ । जहाजको प्रतिक्षा गरेर बसिरहेका थियौं । हामी नजिकै १५–१६ जना युवाहरुको एउटा समूह श्रीलंका जानका लागि आएको रहेछ । उनीहरु हामीतिर हेरेर खासखुस गरिरहेका थिए ।
एकछिनपछि त्यस समूहबाट एकजना म नजिक आएर सोधे, ‘तपाईं कुलमान घिसिङ हो ?’
मैले ढाँट्ने कुरा आएन । हो भनेर इशारा मात्रै के गरेको थिएँ, ‘हो रैछ, हो रैछ’ भन्दै उनले आफ्ना साथीहरु बोलाए । सबैजना हुर्रिएर आए । सबैले खादा बोकेका रहेछन् । धमाधम मलाई लगाइदिन थाले । उता सचिवज्यू रमाइलो मानेर हेरिरहनुभएको थियो । मलाईचाहिँ अलि अप्ठेरो महसुस भयो । मैले सचिवज्यूलाई पनि लगाइदिनू भनेर युवाहरुलाई ईशारा गरेँ । अनि एक–दुईजनाले लगाइदिए ।’
स्वतस्फुर्तरुपमा जनताले दिने यस्तो स्नेहबाहेक विभिन्न संघ–संस्थाका नामबाट गरिने औपचारिक सम्मानको छुट्टै पाटो छ । सम्मानपत्र र कदरपत्रका चाङले आफ्नो घरका दुईवटा कोठा भरिएको उनले सुनाए ।
यस्तो सम्मान कार्यक्रममा पनि कहिलेकाहीँ उनका लागि असहज अवस्था सिर्जना भइदिन्छ । प्रायः मन्त्री, सचिवहरु सँगै भएका बेला । मान्छेहरुले मन्त्री, सचिवलाई वास्तै नगरी उनको वरिपरि झुम्मिएपछि असहज लाग्ने नै भयो । अनि सम्मान कार्यक्रमहरुमा मन्त्रीको अगाडि जब आफ्नो मात्रै बखान हुन्छ, त्यस्तोबेला पनि उनलाई धक लाग्छ ।
कुलमानले अर्को एउटा घटना सुनाए ।
‘२०७३ सालको फागुनतिर मलाई सुन्दरीजलका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्मानका लागि भनेर निम्तो गर्नुभयो । मलाई त्यस्तो निम्तो त हप्तैपिच्छे आइरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ आफू जान लागेको ठाउँमा बाटो पर्यो भने पस्छु । नत्र सकेसम्म टार्ने गर्छु । उहाँहरुलाई मैले व्यस्तताको कारण देखाएर सम्मान थाप्न नभ्याउने बताएँ ।
त्यो कार्यक्रममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि बोलाइएको रहेछ । उहाँ राजनीतिक व्यक्ति भएकाले जानैपर्यो । उहाँ पुग्नासाथ मेरो खोजी गर्नुभएछ । म नआउने सुनेपछि फोन गर्नुभयो । तपाईं तत्काल आउनुपर्यो भन्नुभयो ।
मन्त्रीले नै भनेपछि अटेर गर्ने कुरा आएन । तुरुन्तै गएँ । जाँदा त बाटोदेखि नै बाजागाजा बजाएर धुनधान रहेछ । नागरिक अभिनन्दन गरियो । सम्मान गर्ने बेलामा पनि मेरो मात्रै प्रशंसा धेरै । आफ्नो प्रशंसा सुन्दा खुशी त कसलाई लाग्दैन र, तर देवत्वकरणकै शैलीमा जाँदा चाहिँ अलिक असहज पनि हुन्छ । फेरि पनि उहाँहरुले स्वच्छ मनले गर्नुभएको कामलाई अन्यथा लिने कुरा भएन ।’
उनलाई सम्मानका लागि विभिन्न देशबाट बोलावट आउँथ्यो । तर, महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा बाहेक उनी विदेश गएनन् । ८–१० दिनसम्म विदेशमा बस्दा सकस हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘आफू बाहिर जाँदा त उता के–के बितिसक्यो झैं लाग्ने । त्यसैले सकेसम्म टार्थेँ । बोलाएको जति ठाउँमा गएको भए वर्षमा ७–८ महिनाजति विदेशतिरै हुन्थेँ होला ।’
‘वान्स मोर’ले भावुक
हिजो कुलमान चिलिमेबाट फर्कने समय रसुवाका जनता निकै दु:खी भएका थिए । उनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले एक महिनासम्म रसुवा बन्दसमेत गरे । यसपालि प्राधिकरणबाट निस्कँदा त देशभरकै जनताले उनलाई ‘वान्स मोर’ भनिरहेका छन् ।
जनताको समर्थनलाई आफूले शक्तिका रुपमा लिँदै आएको बताउने कुलमान सरकारले गर्ने नियुक्तीहरुका विषयमा सडकबाट दिइने दबावलाई भने उचित मान्दैनन् । उनी स्वयमले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो पक्षमा भइरहेको सडक आन्दोलन रोक्न आह्वान गरेका थिए ।
‘मेरो कार्यकालमा प्राधिकरणले हासिल गरेका ठोस उपलब्धीहरुका कारण जनताले मेरो पुनःनियुक्ति चाहनुभएको छ । तर, मलाई सरकारले निकालेको नभएर मेरो पदावधि नै सकिएको हो । फेरि नियुक्ती गर्ने–नगर्ने सरकारको विषय हो । यस्ता विषयमा सडकबाट दवाव दिने कार्यले गलत नजिर बस्न सक्छ,’ उनले भने ।
साथै सडक आन्दोलनका क्रममा मानिसहरुलाई चोटपटक लाग्ने, घाइते हुनसक्ने भएकाले आफूले त्यस्तो अप्रिय परिस्थिति नचाहेको कुलमानको भनाइ छ । तर, जनताले आफ्नो पुननियुक्तीका लागि स्वतस्फुर्तरुपमा उठाइरहेको आवाजले भने उनलाई भावुक पनि बनाएको छ ।
‘यसमा खुशी नलाग्ने त कुरै आउँदैन । जसरी कुनै गायक–गायिकाले स्टेजमा गीत गाएपछि वान्स मोरको आवाज आउँदा उनीहरुलाई हौसला मिल्छ, त्यस्तै जनताले मलाई वान्स मोर भन्दा मेरो हौसला बढेको छ,’ उनले भने ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाहरुले पनि उनलाई ऊर्जा मिल्छ ।
‘म पहिल्यैदेखि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरु हेर्छु । कुनै त एकदमै भावुक बनाउनेखालका हुन्छन् । मनै छुने शब्दहरु हुन्छन् । त्यस्तो पढ्दा मैले अझै देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट अझ बलियो बन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दा कुलमान घिसिङका नाममा फेसबुक/ट्विटरतिर धेरै अकाउन्टहरु खुलेका छन् । ती अकाउन्टबाट उनले नै लेखेको जस्तोगरी स्टाटसहरु हालिन्छन् र धेरै मानिसहरु भ्रममा पनि पर्ने गरेका छन् । यस विषयमा प्रश्न गर्दा कुलमानले आफूसँग एउटा फेसबुक अकाउन्ट मात्र भएको प्रष्ट पारे ।
‘म ट्विटर चलाउँदिनँ । एउटा फेसबुक अकाउन्ट छ । त्योबाहेक अरु कुनै पनि सक्कली होइनन् । म आफ्नो फेसबुकमा पनि यदाकदा मात्रै स्टाटस लेख्ने गर्छु । कुनै विषयमा भ्रम फैलिएर स्पष्ट पार्नुपर्यो भने बरु विज्ञप्ति नै निकाल्छु,’ उनले प्रष्ट्याए ।
अत्यधिक जनसमर्थनले उनलाई ‘ब्याकफायर’ पनि भइरहेको छ कि ?
‘ब्याकफायर नभनौं, तर कहिलेकाहीँ त्यसले प्रतिकूलता सिर्जना हुन पनि सक्छ । मैले नै ‘प्रोभोक’ गरिरहेको छु कि भन्ने कतिपयलाई पर्छ । कहिलेकाहीँ माथिल्लो निकायबाट सोधपुछका कुराहरु पनि हुन्छन् । जबकि यस्ता कुरामा मेरो कत्ति पनि हात हुँदैन । म कतै पनि संलग्न छैन ।’
कुलमानको बहिर्गमनका बेला सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको थियो । उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्ने माग सडकमा पनि जोडतोडले उठ्यो । तर, सरकार नटेरेरै अघि बढ्यो । आफूले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगे पनि प्रधानमन्त्रीले रोकेको भनेर ऊर्जामन्त्री पन्छिए भने ऊर्जा मन्त्रालयबाट औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको भनेर प्रधानमन्त्री तर्किए । तर, कुलमानलाई नदोहोर्याउनेमा उनीहरु दुवैको मतो मिलेको विश्वास धेरैले गरेका छन् ।
कुलमान स्वयम्लाई के लाग्छ ? उनलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीको प्रमुख भूमिका होला कि ऊर्जा मन्त्रीको ?
उनले भने, ‘मलाई उहाँहरु मप्रति नकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । उहाँहरुसँग समन्वयमा नै काम गरेको हुँ । भित्री रहस्यहरु त मलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’
प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न चाहेर पनि नपाएको भन्नेचाहिँ उनले स्वीकारे । ‘मैले रिcटायर्ड हुने बेलामा आफ्नो कार्यकालका उपलब्धी, विद्यमान चुनौति र भावी कार्ययोजनाबारे उहाँलाई ब्रिफिङ गर्न खोजेको थिएँ । तर, कोरोना लगायतका कारणले भेटका लागि परिस्थिति अनुकूल भएन होला । पहिले त भेटघाट भइ नै रहेको हो ।’
ऊर्जा क्षेत्र नै प्राथमिकतामा
केही मानिसहरुको तर्क यो पनि छ कि कुलमानले चार वर्षमा प्राधिकरणको कायापलट गरे । अब उनलाई त्यसैमा दोहोर्याउनुभन्दा अर्को कुनै जीर्ण संस्थाको नेतृत्व दिएर त्यसको पनि उद्धार गर्नुपर्छ । यदि सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणबाहेक अरु जिम्मेवारी अफर गर्यो भने उनले स्वीकार्छन् त ?
उनले स्वभावविपरीत लामो जवाफ दिए :
‘व्यक्तिगत रुचि र स्वभावका हिसाबले म कार्यकारी भूमिकामा बढी फिट हुन्छु जस्तो लाग्छ । राम्रो नतिजा पनि त्यसमा आउँछ । म आफैं फिल्डमा खटिएर काम गर्ने मान्छे हुँ । नीतिगत खालको, अनुगमन र नियमन मात्र गर्ने भूमिका मलाई त्यति सुहाउँदैन । फटाफट निर्णय गर्ने र तुरुन्त त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मेरो शैली हो । उमेरका हिसाबले पनि म अझै केही समय मानसिक र शारीरिक रुपमा सक्षम छु । १६ घन्टा खटिएर काम गर्न सक्छु । अबको १० वर्षपछि मलाई कार्यकारी पद दिए पनि सम्भवत स्वीकार्न नसकुँला ।
जहाँसम्म जिम्मेवारीको सवाल छ, म ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को मान्यतामा विश्वास राख्छु । जसको जुन क्षेत्रमा विज्ञता र अनुभव छ, उसलाई त्यही जिम्मेवारी दिँदा उत्कृष्ट नतिजा आउँछ । विज्ञता र अनुभवमा व्यवस्थापनको पार्ट थपिनासाथ सोचेको उपलब्धि हासिल भइहाल्छ ।
मेरो अध्ययन र अहिलेसम्मको अनुभव ऊर्जा क्षेत्रमा छ । त्यसैले म अन्यत्र भन्दा यही क्षेत्रमा बढी राम्रो पर्फमेन्स दिन सक्छु । अरु क्षेत्रमा गर्नै नसक्ने भन्ने होइन, तर अलिकति समय लाग्छ । बुझ्नै समय लाग्छ । पद ओगट्नका लागि वा जागिर खानका लागि मात्रै कुनै जिम्मेवारीमा गइहाल्न हतारिन्न ।
राइट म्यान इन राइट प्लेस नहुँदा नै नेपालमा धेरै निकायहरु सफल हुन नसकेका हुन् । मन्त्री बनाउँदा पनि उसको विज्ञता हेरिँदैन । मन्त्रालय राम्ररी बुझेको मन्त्री भयो भने पो आउटपुट पनि सोचेजस्तो आउँछ । अर्को कुरा उमेर पनि हो । ६० वर्षको मान्छेलाई कार्यकारी भूमिका दिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यो उमेरमा मानिसहरु शारीरिक र मानिसिक दुवैरुपमा गल्न थालेका हुन्छन् । उनीहरु बोल्ड डिसिजन गर्न डराउँछन् । भोलि अख्तियारले तान्ला कि भन्ने भय पालेर केही पनि गर्न सक्दैनन् ।’
‘मलाई प्राधिकरणमा रहँदा सबैभन्दा प्रेसर भनेको भोलि कुनै कारणले छिसिक्क लोडसेडिङ गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ कि भन्ने थियो । त्यही प्रेसरले गर्दा म प्राधिकरणको हरेक घन्टाको डाटासँग अपडेट रहन्थे । कुन प्लान्टको के अवस्था छ भन्ने पूरा जानकारी राख्थेँ । शाखाहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहन्थे । लोडसेडिङ हुन नदिन के-के पो गरिएन । त्यो बयान गर्ने हो भने त एउटा किताब नै लेख्न पुग्छ ।’
ऊर्जा क्षेत्रको त कुलमानले संकटमोचन गरे । तर, देशको समग्र अवस्था अहिले पनि डामाडोल नै छ । जनता अहिले पनि दुखःकष्टमै छन् । उनी नेपालको भविष्यप्रति कति आशावादी होलान् ?
कुलमान भन्छन्, ‘म त धेरै आशावादी छु । तर, काम गर्नुपर्ने धेरै छ । हामीसँग अवसरहरु प्रशस्त छन्, तर तिनको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । मलाई लाग्छ, नेतृत्वले सानोतिनो कुराभन्दा गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरुमा फोकस गर्नुपर्छ । धेरै प्रोजेक्टहरुको कार्यान्वयन गति अत्यन्त सुस्त छ । हामीसँग पर्यटन र कृषिमा अथाह सम्भावना भएर पनि यी क्षेत्रहरु फष्टाउन सकेका छैनन् ।
अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने करिब ८–१० खर्बको लगानी भएको छ । यो लगानीको नतिजा आउने क्रममा छन् । ती सबै आएपछि ऊर्जा क्षेत्र अर्कै स्तरमा पुग्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अरु सबै क्षेत्रलाई सहयोग गर्छ, किनकि विकासको सबैभन्दा आधारभूत तत्व नै ऊर्जा हो । तसर्थ अबका दिनमा देशभित्र उत्पादन हुने ऊर्जा धेरैभन्दा धेरै खपत गर्ने गरी हामीले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने छ । देशका युवाहरु विदेशिन रोक्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो अठोट र दुरदर्शीता चाहिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले उत्पन्न गरेको सकारात्मक तरंग (पोजिटिभ भाइब्स) लाई मर्न दिनु भएन ।’
हरेक व्यक्तिको जीवनमा आरोह र अवरोहहरु आउँछन् । सफलता वा असफलताको उच्च बिन्दु हुन्छ । कुलमानका हकमा प्राधिकरणको ४ बर्षे जागिर नै उनको जीवनको उच्च विन्दू हो कि त्यो आउनै बाँकी छ ?
‘अहँ, त्यसलाई उच्च बिन्दू मान्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । नेपालबाट लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने सफलता हामीलाई मिल्यो । यो एउटा सानो सुधार हो । अरु सबै क्षेत्रमा यस्तै सुधारको खाँचो छ । लोडसेडिङको अन्त्यलाई प्रस्थानविन्दू बनाएर देशलाई प्रगतिपथमा लैजानु छ ।’
राजनीतिमा जाने सम्भावना
एमसीसीका विषयमा मैले सम्वन्धित ठाउँमा, बोल्नैपर्ने ठाउँमा बोलेको छु । यो परियोजनाको प्राविधिक पक्षको मात्रै मैले विश्लेषण गर्ने हो । यसका राजनीतिक र कानूनी पाटोमा त राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रष्ट्याउनुपर्ने हुन्छ
हामीले सोध्यौं, ‘यदि जनचाहनालाई कुल्चिदै सरकारले तपाईंलाई कतै पनि नियुक्ती दिएन भने तपाईंका व्यक्तिगत योजना के छन् ? जनताले तपाईंलाई कस्तो भूमिकामा देख्न पाउलान् ?’
कुलमानले आफू कुनै हतारोमा नभएको बताए । भावि योजनाका विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइनसकेको उनको भनाइ छ ।
‘आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने सोच्दैछु । भर्खर १५–२० दिन त भयो । मैले जहाँ पायो त्यहाँ हात हाल्न पनि मिल्दैन । कुनै कम्पनीमा जागिर खाएर बस्ने कुरा पनि आएन । राम्ररी सोचेर निर्णय लिन्छु ।’
कुलमानका कट्टर समर्थकहरुको एउटा तप्का पनि छ, जसले उनलाई अब प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकभन्दा माथिल्लो ओहदामा देख्न चाहन्छ । उनले राजनीतिमा आएर मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोल्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् ।
सोधियो, ‘भोलि राजनीतिमा आएर मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा तपाईंको विकल्पमा पर्छ कि पर्दैन ?’
यो प्रश्नलाई उनले ठाडै नकारेनन् ।
‘यो परिस्थितिले तय गर्ने कुरा हो । भविष्यको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, त्यसै अनुसार अघि बढ्छु । अहिले केहि सोचिसकेको छैन ।’
राजनीतिमा तपाईंको रुचि कति छ ?
उनी अलिकति खुले ।
‘म कार्यकारी भूमिका र लिडरसिपमा फिट हुने मान्छे हो । लिडरसीप भनेको हरेक क्षेत्रको हुन सक्छ । सकेसम्म त कर्पोरेट लिडरसिप नै गर्छु । त्यो पनि ऊर्जाकै क्षेत्रमा । होइन, त्यस्तै परिस्थिति आयो भने अरु विकल्पमा पनि सोच्न सकिन्छ ।’
‘भनेपछि राजनीतिलाई पनि विकल्पमा राख्नुभएको छ ?’
‘भनेँ नि, त्यो परिस्थितिले तय गर्छ । मैले अपेक्षा गरेर मात्रै हुने कुरा होइन ।’
तपाईंले देशभित्र जहाँबाट जोसित चुनाव लडे पछि जित्नुहुन्छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
‘चुनाव जित्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । म त जितौंला रे । तर, त्यसपछि ह्वाट नेक्स्ट भन्ने हुन्छ नि । चुनाव जित्नेभन्दा जितेर के गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदा स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ । जहाँ बस्दा पनि राष्ट्रकै लागि योगदान गर्ने हो । परिस्थितिले कता डोहोर्याउँछ हेरौं । म लचक नै छु । बाहिर आएपछि त धेरै कुरा सोच्न सकिन्छ नि ।’
तर, तपाईंलाई कार्यकारी भूमिकामा बढी रुचि भएकाले राजनीतिमा गइहालुँ भन्ने त छैन होला ?
‘राजनीति पनि कार्यकारी नै हो नि । मन्त्रीभन्दा कार्यकारी के हुन्छ ।’
‘अब कति समय पर्खिनुहुन्छ त सरकारलाई ?’
‘हेर्दै जाउँ परिस्थिति कस्तो आउँछ । म सरकारले के निर्णय गर्ला भनेर पर्खेर बसिरहेको चाहिँ छैन ।’
‘सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै ग्रीन सिग्नल पाइसक्नुभएको छ कि छैन ?’
त्यस्तो केही छैन । भर्खर त १८–२० दिन भयो । हतार के छ र । अलिदिन आराम गरौं ।’
खोइ त आरोप ?
हामी कुराकानीलाई बिट मार्न खोज्दै थियौं, कुलमानले रोके ।
‘खोई त ममाथि लाग्ने गरेका आरोपहरुबारे केही पनि सोध्नुभएन ?’ उनले भने ।
उनले नै यसरी बाटो खोलेपछि हामी पछि हट्ने कुरा आएन । अनि खोलियो आरोपको कन्तुर ।
आरोप १ : तपाईं मिडियावाजीमा रमाउनुहुन्छ । मिडियालाई हातमा लिएर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनुभएको छ र त्यसैको बलमा प्राधिकरणमा दोहोरिने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।
जवाफ : तपाईंलाई पनि थाहा होला म मिडियावाजी गर्छु या गर्दिनँ भन्ने । मभन्दा धेरै मिडियाबाट भाग्न खोज्ने त को होला र ? मिडियामा आउने कुराहरु उहाँहरुका आफ्ना धारणा हुन्, आफ्ना लेखाइ हुन् । मैले आजसम्म कुनै पत्रकारलाई फोन गरेर यो लेखिदिनुपर्यो भनेको छैन । भन्ने कुरा पनि आउँदैन । मिडियाको साथ र सहयोग अवश्य मलाई छ, तर त्यो उहाँहरुको स्वतस्फुर्त हो ।
आरोप २ : लोडेसेडिङ अन्त्य गरेको जस आफू एक्लैले लिएर तत्कालीन मन्त्री र सरकारलाई छायामा पार्नुभयो, जबकि यो तपाईंको एक्लो प्रयासले सम्भव थिएन ।
जवाफ : मैले आजसम्म कहिँ कतै पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस एकलौटि लिन खोजेको छैन । मैले सँधै भन्ने गरेको छु, यो टिमवर्कले सफल भएको हो । प्राधिकरणको पुरै संयन्त्रले यसमा काम गरेको छ । तर, के हुन्छ भने हरेकचोटि सबैजनाको नाम लिन त सम्भव हुँदैन । जस्तो कि कुनै लडाईंमा जित हासिल भयो भने सेनापतिको नाम आउँछ नि, जबकि त्यसमा थुप्रै सैनिकहरु लडेका हुन्छन् । त्यसैले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको हिसाबले जनताले मलाई जस दिनुभएको छ । म त सँधै भन्छु कि यो टिम वर्कको नतिजा हो । अरुले पनि यही ढंगले बुझ्नुहोस भन्न चाहन्छु ।
आरोप ३ : तपाईंको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग ‘खास’ सम्वन्ध छ । त्यही सम्वन्धको आडमा तपाईंले प्राधिकरणमा छँदा आफूलाई शक्तिशाली ठान्नुभयो र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई समेत टेर्नुभएन ।
जवाफ : यो पनि सत्य होइन । प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले मलाई नियुक्त गरेकाले मलाई प्रचण्ड निकट भनिएको होला । अन्यथा उहाँसित अरु विशेष सम्वन्ध थिएन र छैन । मैले आफ्नो कार्यकालमा ३ जना प्रधानमन्त्री र ४ जना मन्त्रीसँग काम गरे । मैले सबैसँग समदुरीको सम्वन्ध राखेको छु । म ‘चेन अफ कमाण्ड’मा विश्वास गर्छु । कसैसँग आवश्यकताभन्दा बढी नजिक वा टाढा हुन खोज्दिनँ ।
जहाँसम्म अटेर गरेको प्रश्न छ, हो मैले आफूलाई दिइएका आदेश र निर्देशन सतप्रतिशत पालना गर्न सकिनँ होला । तर, सही र उचित निर्देशन हरसम्भव पालना गरेको छु । कहिलेकाहीँ उहाँहरुको बुझाईको कमि वा अन्य कारणले अनुपयुक्त कुराहरु पनि आउँछन् । म उहाँहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्छु । कानूनी वा प्रक्रियागत कारणले पनि कतिपय कामहरु गर्न सकिँदैन । तर, त्यसलाई मैले कुनै व्यक्तिविशेषको आड लिएर अटेर गरेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । यति हो कि कसैले मबाट जबरजस्ती गलत काम चाहिँ गराउन सक्दैन । भनसुनका आधारमा मबाट कुनै काम हुँदैन ।
आरोप ४ : आफ्नो कार्यकालमा भएका ऊर्जामन्त्रीहरुसँग तपाईंले राम्रो सम्वन्ध बनाउन सक्नु भएन ।
जवाफ : त्यस्तो त होइन । काम गर्दा अलिअलि कचमच त भइ नै हाल्छ । होइन भने मन्त्रीज्यूहरुसँग मैले समन्वयमै काम गरेको हो । मन्त्रीसँग ट्यूनिङ नमिलेको भए रिजल्ट निकाल्न सम्भव नै हुन्थेन । मेरो कार्यशैलीप्रति कसैलाई कहिँ–कतै असन्तुष्टि होला । तर, मैले त संस्थाकै हित हेरेर काम गरेको छु ।
आरोप ५ : तपाईंलाई लोकप्रियताको नशा छ । आफ्नो लोकप्रियता गुम्ला कि भन्ने डरले तपाईंले एमसीसीजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा पनि मुख खोल्नु भएन, जबकि तपाईं यो परियोजनाको पक्षधर हुनुहुन्छ ।
जवाफ : एमसीसीका विषयमा मैले सम्वन्धित ठाउँमा, बोल्नैपर्ने ठाउँमा बोलेको छु । यो परियोजनाको प्राविधिक पक्षको मात्रै मैले विश्लेषण गर्ने हो । यसका राजनीतिक र कानूनी पाटोमा त राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रष्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । पदीय हिसाबले पनि मैले सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी गर्न मिल्दैनथ्यो । आफ्नो च्यानलमा गर्नुपर्ने काम त मैले गरेकै हो नि ।
आरोप ६ : प्राधिकरणमा तपाईंले आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई अनावश्यक पेलान दिनुभएको थियो । प्राधिकरणका अरु उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु तपाईंसँग खुशी थिएनन् ।
जवाफ : यो पनि गलत हो । म एकदमै लचिलो मान्छे हुँ । तर, कसैले फटाई गर्यो भने चाहिँ सहन सक्दिन । त्यस्तो बेलामा कठोर भएँ होला । अन्यथा सबै कर्मचारीप्रति म अत्यन्तै उदार थिए । म विद्युत प्राधिकरणका प्रत्येक शाखामा पुगेको छु । तल्ला तहका कर्मचारीको कुरा पनि सुनेको छु । जबकि कतिपय अघिल्ला कार्यकारीहरु क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि पुग्दैनथे ।
आरोप ७ : जनताको अथाह समर्थनले गर्दा तपाईमा घमण्ड बढेको छ ।
जवाफ : जनताको समर्थनले मलाई शक्ति त मिलेकै हो । तर, त्यसलाई प्रोत्साहनको स्रोतका रुपमा लिएको छु । घमण्ड किन गर्ने ? भोली मैले सानो गल्ति गरेँ भने पनि आजको स्थिति उल्टिन सक्छ भन्ने मलाई थाहा छ । त्यसैले आज जनसमर्थन छ भन्दैमा मै हुँ भन्दै हिँड्दिनँ ।-अनलाइन खबरबाट
Clomid 50mg Achete comprare cialis online